Omenala Culinary nke France | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Francia, Gastronomy
Ọ bụrụ na e nwere ilu kwuru sị, ebe iga ka eme ihe i huru, Anyi nwekwara ike ikwu ebe go gara iri ihe i huru ...? N'ezie! M na-ekwusi ike mgbe niile na ezumike ga-abụ ezumike ezumike na ọ bụrụ na ị na-aga Francia, nke ọma, ọtụtụ karịa n'ihi na gastronomy nke French Ọ bụ otu n'ime ụwa kachasị mma.
Kedu ihe bụ omenaala nri ndị France? Kedu ihe ị nwere ike iri, ebee, olee mgbe, n'ụzọ ọ bụla? Ka anyị chọpụta taa.
France na nri ya
Onye ọ bụla maara nke ahụ Nri French dị oke mma na n'ọtụtụ ọnọdụ, nụchara nke ọma. Ọ bụ akụkụ nke amara nke obodo ahụ na stampụ ndị njem ya. Anyị niile ejiriwo butter na ham sandwich ma ọ bụ macaron rie nri na Seine. Ma ọ bụ ihe yiri ya. Ejegharịwo m ọtụtụ site na wara wara nke nnukwu ụlọ ahịa na-ahụ ihe ịtụnanya, edetụla m ire Mousus na chocolate na m zụtara na-atọkwa soft soft chiiz ...
Ọ bụ eziokwu na dịka onye njem nleta, ọ bụrụ na ị nwere ike chọọ, ị nwere ike iri nri ụbọchị niile ma jiri oge ọ bụla nwalee ihe dị iche iche, mana ndị France na-erikarị ihe karịa ndị njem nleta. N'ezie, a na-ekwu maka ya mgbe niile isi nri atọ: nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị na ole na ole sandwiches n'etiti. Na nri isi ọnụnọ nke anụ, azụ na anụ ọkụkọ dị mkpa.
N'adịghị ka mba ndị ọzọ dị na Europe dịka England ma ọ bụ Germany, ebe a nri ụtụtụ bụ kama ìhè. Enweghị sausaji, àkwá, ham na abụba dị ukwuu ... Achịcha na kọfị o toasts ma ọ bụ croissants ma ya mere ị ga-aga nri ehihie. Na nri ụtụtụ ị na-eri nri n'isi ụtụtụ, tupu ị gawa ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ. Ọ dịghị onye na-etinye oge dị ukwuu isi nri ụtụtụ, ọ bụ maka ị drinkụ ihe ọ andụ hotụ na-ekpo ọkụ na ịme achịcha ọsọ ọsọ.
Mgbe ahụ bụ oge awa nke nri ehihie, hapụ ya, otu awa zuru ezu n'ọtụtụ ọrụ, nke na-amalitekarị n'elekere 12:30 nke ehihie. Yabụ, ọ bụrụ na ị nọ n'okporo ámá nke obodo ahụ n'oge ahụ, ị ​​ga-amalite ịhụ ndị mmadụ, na-akwụ n'ahịrị na ụlọ ahịa nri ma ọ bụ na-anọdụ ala na tebụl na obere ụlọ nri. N'ezie n'oge ndị ọzọ enwere onyinye dị uchu n'oge nri ehihie mana oge ọsọ ọsọ taa zuru ụwa ọnụ.
Nri ehihie na-agụnyekarị usoro ọmụmụ atọ: Starter, isi N'ezie na nke atọ N'ezie ma a eji megharịa ọnụ ma ọ bụ ụfọdụ cheese. O doro anya na ọ na-esiri ike ịbịa n'oge nri abalị na naanị nri ụtụtụ ngwa ngwa na nri ehihie na, ka ị na-arụ ọrụ mgbe emechara, na-abụkarị ọkụ. Ya mere French nwere ike ịdaba na a nụrụ ụtọ, nri ehihie tinyere kọfị ma ọ bụ tii. Karịsịa ụmụaka, ndị nwere ike ịnata ya site n'elekere anọ nke ehihie.
Ma mgbe ahụ, n'etiti nri ehihie ahụ na nri abalị kwesịrị ekwesị, ma n'ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ mmanya dị n'etiti ọrụ na ụlọ, ọ na-ewere ọnọdụ apéritif. Ihe ochie nri mkpịsị aka ihe dika elekere asaa nke ehihie. Maka m ọ nweghị ihe dịka nri na-atọ ụtọ nke mkpụ oyi, yana mkpụrụ osisi a mịrị amị, chiiz dị iche iche na mkpụrụ vaịn. Apéritif m kacha amasị.
Ya mere, anyị na-abịa nri abalị, ị na-eri nri, nke m masịrị bụ n'oge n'oge ọ nwere ike ịdị jụụ n'etiti 7:30 na 8 pm, dabere na usoro oge ezinụlọ. Ọ bụ nri kacha mkpa n’ụbọchị, ezinụlọ na-agba mbọ, izu ike, mkparịta ụka na izute. Ọ bụrụ na ezinụlọ nwere ụmụ ntakịrị, ha nwere ike nye ha nri tupu mgbe nri abalị gachara maka naanị ndị okenye. Mmanya enweghị ike ịnọ.
Lọ oriri na ọụrantsụ na-arụ ọrụ oge ndị ọzọ, n'ezie, mana ị nwere ike iri nri abalị na elekere asatọ, ọ bụ ezie na nri abalị n’etiti abalị ga-ekwe omume ma ọ dịkarịa ala na nnukwu obodo. Na oge nri ehihe ọ bụghị n'ihi na ụlọ oriri na ọ usuallyụ restaurantsụ na-emechikarị n'etiti nri ehihie na nri abalị n'ihi ya, ọ gaghị abụ ihe dị mma ị ga-eme atụmatụ iri nri mgbe elekere abụọ nke ehihie gasịrị.
Na omenala ndị isi nri ndị France enwere nkọwa: ndị French na-azụta ihe, ọ bụghị nri; Ha na-esi nri dị ọtụtụ n’ụlọ na ihe ọhụrụ, hazie menu ma nọdụ ala ka ya na ndị ezinụlọ ya ma ọ bụ ndị enyi ya nwee ọ enjoyụ. Ọ dịghị onye na-eche ịzụrụ ihe site na igwe ma rie ya guzo n'akụkụ ya, ma ọ bụ taa apụl n'akụkụ ebe a na-asa mmiri, ma ọ bụ iri nri na tebụl kichin.
Echela ihe ọ bụla karịa ka a gbakọọ na Na mba ahụ dum, e nwere ebe a na-eme achịcha 32 puku, ihe dị ka nde baguettes 10 na-ere kwa afọ... French bụ ezigbo ndị hụrụ achịcha na mgbe ha na ndị ọzọ dị mfe Efrata, dị ka cheese na mmanya, ha na-agaghị echefu echefu efere.
Anyị kwuru na anụ ahụ nwere ibu, yabụ na nri dị ka ama ama Boeuf Bourguignon, ukwu nke atụrụ na anụ ezi ụdị Toulouse. Anụ ndị ọzọ bụ anụ ọkụkọ na ọbọgwụ, dị na nri ndị ama ama dịka Ọkụkọ Dijon, mmanya gbara mmanya, ma ọ bụ ọbọgwụ na oroma, toki nwere walnuts ma ọ bụ ọgazị braised nke ahụ bụ ekeresimesi ekeresimesi.
Banyere azụ, ka anyị cheta na France nwere ọtụtụ puku kilomita nke ụsọ oké osimiri, n'ihi ya, ọ nwere ụlọ ọrụ ịkụ azụ dị mkpa na Atlantic na Mediterranean. Yabụ enwere salmon (salmon en papillote, tuna (tuna e ghere eghe), sọdfish à la Nicoise ma ọ bụ efere esi nri prawns, mọsel, klam na azụ azụ. E nwekwara lobsters na oporo.
Anya na France bụkwa ala kọfị na obere kọfịNdị obodo ahụ na-enwe mmasị ịga kọfị ma nọrọ n'èzí na-ele ụwa anya ka ọ na-agabiga. Naanị ma ọ bụ soro, ịgụ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ nanị ịlele ọbịbịa nke ndị mmadụ bụ omenala ochie.
Eziokwu bụ na enweghị mgbagha na ndị France na-atụle isi nri na iri nri abụọ, yabụ, ọ bụrụ na ịgagharị na mba ahụ, ị ​​ga-achọpụta ọmarịcha nri mpaghara na ọtụtụ mpaghara ebe UNESCO ekwuputala gastronomies ya Intangible Cultural Heritage of Humanity.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Francia » Omenala Culinary nke France